Ogaden News Agency (ONA) – Wadahadalka iyo Ujeedada Dacaayadaha ay ku Dhex Wadaan Saraakiisha Itobiya
Wadahadalka iyo Ujeedada Dacaayadaha ay ku Dhex Wadaan Saraakiisha Itobiya
Posted by ONA Admin	/ March 11, 2015
Wararka aan ka helayno meelo ka mid ah Ogadenya ayaa shaagaya in meela ka mid ah dalka ay saraakiisha halkaa joogta ay shiranayaan dadweynaha iyagoo ugu khudbaynaya inay heshiiyeen dawladda Itobiya iyo ONLF. Dacaayadan raqiiska ah ayay dadweynaha qaarkood codsanayaan in loo ifiyo meesha ay salka ku hayso iyo ujeedada ay ka leeyihiin saraakiisha Itobiya inay yidhaahdaan waan heshiinay ONLF iyadoo la ogsoon yahay inuusan wadahadlakii rasmiga ahaa weli uusan furmin. Inta aynaan ka faaloonin ujeedada ka dambaysa dacaayadaha noocaa ah;
Wadahadalada u dhexeeya Itobiya iyo JWXO oo bilowday Bishii Sebtember ee 2012, sidaan la socono waxaa ka dambeeyay R/wasaarihii Itobiya Meles Zanawi. Hasa ahaatee Meles wuxuu si lama filaan ah u dhintay maalma ka hor shirka wadahadalka oon ka furmin Nairobi. Halkaa waxaa ka baxay shaqsiyad ay ka dambeeyaan saraakiisha Wayaanaha oo awood u lahaa inuu Dagaal qaado, Nabadna dhaliyo haduu ku waayo dagaalka wuxuu doonayay.
Wareegii 1aad ee wadahadalka waxaa lagu go’aansaday qodbadii qaabayn lahaa habka uu wadahadalka u socon doono. Hasa ahaatee wareegii 2aad ee wadahadalka waxaa kasoo qaybgalay Jenenadii ciidanka ee joogay Ogadenya kuwaasoo ku talagalay inay carqaladeeyaan qaabkii lagu heshiiyay inuu u socdo wadahadalka. Wuxuuna ku dhamaaday wareegii 2aad in la’isku mari waayo shuruudihii ay jananadii la socday wafdiga Itobiya ay soo hordhigeen wafdigii ONLF. Waxaa halkaa ku hakaday wadahadalkii lagu doonayay in qadiyadda Ogadenya xal waara looga gaadho ka dib markii Jenanadii Itobiya ka yimid ay ula muuqatay inaan loo baahnayn in ONLF la hor-fadhiisto. Intii u dhaxaysay ee 2012 – 2014 waxay Jananadaasi ka dhaadhicyeen dawladii dhexe ee Wadahadalka u xilsaarnayd in aan loo baahnayn wadahadal oy ONLF dagaal ku qaadayaan kagana adkaanayaan gude iyo dibadba. Natiijadii waxay noqotay inay sidii dhaqanka u ahayd dad shacab ah laayaan, kharash badanna ku bixiyaan qurba-joogta iyo shirarka safaaradaha Itobiya ay ugu yeedhaan dadweynaha Somalida ah ee dalalkaa ku nool.
Waxay noqotay in wadahadal la’isugu soo noqdo si loosoo afjaro dagaalada 20ka sano ka socday Ogadenya. Hasa ahaatee, waxaa lagama maarmaan ah labada daraf ee wadahadlaya inay leeyihiin kartidii ay ku dhalin lahaayeen Nabadda, isla markaana ay danta guud ka hormariyaan danahooda gaarka ah. Waxaase muuqata in Jenenada Wayaanaha ah ee ka taliya dalka Itobiya gaar ahaan kuwa jooga Ogadenya ay noqdeen Dagaal-oogayaal (Warlords). Dawlada Dhexe iyo R/wasaariha dalka Itobiyana waxay dhab ahaan la awood yihiin Dawlad Federaalka Somaliya iyo M/weynaha Somaliya. Waxayna is-dheeryihiin un qaska Shabaabka uu kawado Xamar oon ka jirin Adisababa.
Hadaba, qorshaha saraakiishan ku naaxay dhiiga shacabka ee noqotay Dagaal-oogayaasha oo ah mid fashilan ayaa waxay doonayaan inay shacabka gudaha ka dhaadhiciyaan inuu heshiis dhex maray ONLF iyo Itobiya, sidaa darteed ay joojiyaan halganka gudaha ka socda.
Laba arimood ayaa halkaa inooga muuqanaya. 1- Heshiiska ay doonayaan kooxdan Dagaal-oogayaasha ah nooca uu yahay. 2- Awood darida dawladda Itobiya oo aanan lahayn karti iyo awood ay wadahadal dhab ah kula gasho ONLF.
Fikirka siyaasiyiinta Itobiya waxaanay weli soo dhaafin casrigii Minilik iyadoo awooda dawladda dhexe aanay dhaafin Adisababa, gobolada ay xukumaan Dejazmach ama Jenenada.